Induction annealing copper tube, pipe, annealing steel bar
musha / Applications / Induction Annealing / Induction Kuwedzera
Category: Induction Annealing Tags: annealing, zvinomisikidza ndarira induction, annealing yendarira chubhu, zvinomisikidza, maitiro ekusimbisa, yendarira waya inosimbisa, high frequency annealing, induction annealing, induction inosimbisa ndarira, induction annealing process
Izvi zvinopisa zvishandisi izvo zvatove zvakakonzerwa kushandiswa. Induction annealing kunoderedza udzvinyiriri, kunowedzera ductility uye kunoderedza kunetseka mukati. Kunyatsogadzirisa muviri inzira inogadziriswa basa rakakwana. Ne seam annealing (inonyanya kuzivikanwa seameri normalizing), chete nzvimbo inopisa inopisa inogadzirwa nehutambo inogadzirwa inobatwa.
induction inosimbisa bharari
Induction inowedzera uye inogadzirisa inonatsa kupisa, kutendeseka uye kupisa kwenharaunda, kunyatsogadzirisa kutonga, uye nyore nyore mu-integration integration. Induction inobata basa roga roga kuti ritaure zvakananga, nekutonga zvirongwa zvinopfuurira kuongorora uye kutora zvose zvakagadzirwa.
Induction annealing uye normalizing inoshandiswa zvakanyanya mumutambo uye pombi pombi. Inowedzerawo tambo, zvigadzirwa zvematare, mashizha emagetsi nemhangura tubhu. Kutaura zvazviri, kuburitswa kwakanaka kune chero basa ripi zvaro rinoshandiswa.
Yakakodzera induction annealing equipments kusanganisira DW-MF, DW-HF uye DW-UHF induction heater.